Monday January 11, 2021 - 10:47:57 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Mareykanka ayaa la sheegay in ay liiska waxa loogu yeero argagaxisada ku dartay maleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo ah wakiillada iiraan ee dagaallama dalka Yemen.
Wakaaladaha wararka reergalbeedka oo soo xiganaya ilo wareedyo ku dhow wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Washington ayaa sheegay in Xuuthiyiinta lagu sumadeeyay liiska waxa loogu yeero Argagaxisada.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in mareykanku uu tallaabadan uqaaday si uu awood siyaasadeed usiiyo isbahaysiga Carabta ee Aala Sacuud iyo Imaaraatku hoggaaminayaan kuwaas oo dagaal daba dheeraaday uga jira dalka Yemen.
Diblumaasiyiin ayaa sheegay in tallaabadan uu Mareykanku qaaday ay carqaladayn doonto waxa loogu yeero gargaarka bani'aadanimo ee Yemen ka socda.
Haddii Xuuthiyiinta lagu biiriyo liiska Argagaxisada waxaa adkaan doonta in ay sii socdaan wadahalladii siyaasadeed ee Q.Midoobay garwadeenka ka aheyd kuwaas oo udhaxeeyay dhinacyada isku haya Yemen.
Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaa bilo ka hor sheegay in xuuthiyiintu ay fulinayaan ajandayaasha dowlada Shiicada iiraan, in liiska argagaxisada lagu daro kooxo shiico ah ma ahan wax cusub waxaana xusid mudan in reergalbeedka iyo maleeshiyaadka shiicada ah ay iska kaashadaan ladagaallanka muslimiinta sunniga ah.